Kulesi sifundo esibizwa ngokuthi yi-German Perfekt inkulumo, sizokunikeza imininingwane efingqiwe mayelana nesikhathi se-perfekt ngesiJalimane.
Sesikubonile phambilini, iPerfekt isho inkathi edlule nge -di efana nePräteritum. Njengoba wazi, imisho yesikhathi esedlule ichaza izenzo ezenziwa zaqedwa esikhathini esedlule.
Senze isifundo esinemininingwane eminingi nesichazwe ku-perfekt ngesiJalimane ngaphambili, uma ufuna ukuhlola leyo ndaba, chofoza lapha: German Perfekt
Njengoba kushiwo ngaphambili, kukhona umehluko othile phakathi kwePerfekt nePräteritum ngesiJalimane; I-Präteritum isetshenziswa kakhulu ngolimi olubhalwayo, isetshenziswa kwizisho, isetshenziswa kakhulu ezinganekwaneni, kumanoveli noma ezindabeni, iPerfekt isetshenziswa ngolimi oluhlanganayo, hhayi emisebenzini efana namanoveli nezindaba.
Lezi zikhathi ezimbili zingasho zonke izikhathi ezedlule ngokuya ngendawo, ngaphandle kwasikhathi esedlule.
Isibonelo, bangakwazi ukufaka izikhathi ezifana nokusebenza kwe-t "," kusetshenzwe "," ukusebenza ", kepha akwenzelwanga ukusebenza kwe-miş", "kusetshenzwe" izikhathi.
Isihlanganisi sesenzi sesi-German perfekt
Isihlanganisi sesenzo se-german perfekt
Izenzo zesi-german perfekt
Kwikholamu yokuqala (kwesobunxele) yamatafula angenhla, kunikezwe ifomu elingapheli lesenzo, kukholamu yesibili isenzo sithi Partizip Perfekt, le yingxenye ezosetshenziselwa ukwenza umusho ngesikhathi sePerfekt. I-Partizip Perfekt yesenzo ngasinye kufanele ibanjwe ngekhanda. Kwikholamu yesithathu ukusuka kwesobunxele, kunikezwa okufana nesenzo sesiTurkey. Kwikholamu yokugcina, kuboniswa isenzo esisizayo esizosetshenziswa nalesi senzo.
E-Perfekt, iningi lesenzo esisizayo esithi "haben" sisetshenzisiwe, sizamile ukusho cishe zonke izenzi ezingajwayelekile ezisetshenziswe ne- "sein" ngenhla. Ngakho-ke, cishe kuzoba okulungile ukusebenzisa i-haben ngesenzo esingafakiwe etafuleni elingenhla.
Ukuze uthole inkulumo eningiliziwe German Perfekt Bheka isihloko sethu okuthiwa.
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-11 ezedlule, ngomhla ka-27 Disemba 2020, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngomhla ka-27 kuZibandlela 2020.
Ukwenza Isigwebo SaseJalimane
Tags: Isihlanganisi sesenzi sesi-German perfekt, German perfekt inkulumo, tento german perkeft